Xoghayaha arrimaha dibada Britain oo yimid Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXoghayaha arrimaha dibada Britain oo yimid Muqdisho
March 15, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ku qaabilaya xoghayaha arrimaha dibada Britain Boris Johnson. [Xigashada Sawirka: Radio Muqdisho]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xoghayaha arrimaha dibada dalka Britain ayaa maanta oo Arbaco ah yimid caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada (Villa Soomaaliya) ku qaabilay Xoghayaha arrimaha dibada Britain Boris Johnson.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Xoghayaha arrimaha dibada, ayaa ka wadahadlay arrimo badan oo ay kamidyihiin taageerada dadka ay saameysay abaarta ka jirta Soomaaliya,la dagaalanka maleeshiyada Al-Shabaab iyo arrimo kale oo la xiriira iskaashiga u dhaxeeya labada dal.
Britain ayaa bisha May ee sanadkan qorsheynaysa in ay gudaha magaalada London ku qabato shir ku saabsan Soomaaliya.
March 15, 2017 British Foreign Secretary arrives in Mogadishu
Ankara-(Puntland Mirror) In ka badan afar sarkaal ayaa lagu qabtay koonfurtga-galbeed ee dalka Turkiga, kuwaasoo lala xiriirinayo weerar lagu qaaday huteelka Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan u joogay markii uu socday isku-daygii afgembiga fashilmay oo [...]